फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - नेता नं एक !
नेता नं एक ! सर्वज्ञ वाग्ले
नेता भन्नाले कुनै पनि समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने लिडर हो । ऊ वोल्न, हिँड्न, खान र मान सम्मानाँ निडर हुन्छ । ऊसको डिनर घरमा भन्दा बाहिर बढी हुन्छ । ऊ राजनीतिको पिल्लर पनि हो । ऊसको शाख हरेक समुदायमा हुन सक्छ । बाँदर समुदाय, भैंसी समुदाय, गोरु समुदाय, बाख्राको समुदाय, भेडा समुदाय, गधा समुदाय, गिद्ध समुदाय, कुखुरा समुदाय, स्याल समुदाय, मान्छे समुदाय, कुकुर समुदाय, ढुकुर समुदाय, बगाले साँपको समुदाय, चराको समुदाय, माछाको समुदाय, सबैको आआफ्नै समुदाय छ र त्यसका पनि हरेक लिडर हुन्छन् । लिडरले लिड गरिरहेका हुन्छन् त्यसलाई नेता भनिन्छ । नेताका पनि नेतालाई नेता नं एक भन्दा तपाई आफै भन्नु म कसरी गन्नु ?
एउटा स्याल करायो सरा स्याल कराउँछन् । एउटा कुकुर भुक्यो सारा कुकुर भुक्छन् । एउटा गधा हिँड्यो, सारा गधा एकै लाइना‘ हिंडछन् । एउटा भेंडा हिँड्यो सारा भेंडा त्यसको पछी पछी अन्धा भएर हिँडछन् । चाहे खाल्टो होस् चाहे भड्खालो नेता नं एकको पछी एकसय एक लाग्छन् ।
नेता हुन पुन्पुरा‘ ल्याउनु पर्छ । सबैको नेता भन्दा पनि मनिसको नेता चाहिँ हेर्दा भलामी, या फटाया, बोलक्कड, शभा सोसाइटिया‘ दोसल्ला, माइक, गाडीका साइता‘ हराउँछन् र जुराउँछन् पनि र झण्डा मुनि फहराउँछन् । नेता नं एक त्यसै भइन्न, समाजाँ नेता त्यसै कहिन्न । नेता कहिन त्यो समाजाँ बसेको पुरानो हुनु पर्यो । नेताको खानदानाँ हजुरबाउ नेता हुनु पर्यो । हजुरबाउ नभए बाउ नेता हुनु पर्यो । त्यो पनि नभए दाइ, भाइ, दिदी, वहिनी, आमा, मामा पनि नभए, ससुरो चाँहि नेता हुनै पर्यो । त्यो पनि नभए सासू त हुनै पर्यो । त्यै पनि नभए नेता गाउँको हुनु पर्यो । तै पनि नभए घरका, परका, थरका कतै न कतै जोडेर नेता भएपछि नेता नं एक हुँ भन्न पाइहालियो नि हजुर ! भनौं भने के भनौ यो नेता हुन पनि कुनै विशेष पढाई, लेखाइ, बुद्धिसुध्दि, इज्यत, मान, मर्दन, सिधा, साधा हुनै पर्छ भन्ने छैन । त्यति भए पनि आफ्नो पोजिसनाँ कमी हुन दिन भएन, त्यो चाहिँ हुँदै भएन । चाहे समाचाराँ होस्, चाहे भाषाँ, चाहे दोसल्लाँ चाहे फेसबुकाँ हुक्राँ गरेको फोटो सहित डुक्रिएको आवाज, चार भाइ साथाँ भविष्य माथाँ दलवल सहित छलफल गर्ने औकात भएपछि नेता नं एकको लाइनाँ पाइन् लाइन्छ, लाइन पाइन्छ ।
नेता नं एकले एकफेर पोजिसन तलमाथि हुनासाथ भतभताउँदै जमिनाँ खुट्टा, टेबलाँ बुड्जुत्ता, माइकाँ मुख, जनतालाई दुख, घरकालाई सुख नदिई फेरि गुमेको पावर वापसै आँउदै–आउँदैन । यता भुकेर उता झुकेर, उता कुदेर, उता कुटेर, उता लुटेर पनि आफू मञ्चाँ सन्चसँग पुग्नै पर्यो ।
समाजाँ समाजको नेतृत्व उता उचाल्यो उता पछार्यो उता बजार्यो उता थचार्यो उता ददार्यो उता उधिन्यो, उता उसिन्यो, उता खोस्रियो, उता दोब्रियो जसरी पनि आफू फक्रियो नेता नं. एक ता पक्रियो– पक्रियो समाज भाँडेरनै त पद बाँडियो नि हैन त हजुर ?
फुटाउ र राज्य गर । नेता नं एकको स्पेशल सूत्र हारे पनि विरोध जिते पनि विरोध, यता पनि विरोध उता पनि विरोध जताततै विरोध, विरोधको विचाँ विरोध अनी बन्यो हिरो । बोल्न आँउदैन ठीक छ चलेकै छ ईतिहास छैन चलेकै छ, शिष्टता छैन चलेकै छ के फरक पर्छ, आफु नेता नं एक हुनै पर्छ ।
नेता नं एक हुन आफ्ना घरका आफ्ना थरका, जाँड ग्रुप, रक्सी ग्रुप झुरुप्प भेला गर्न सक्ने खुवी पनि हुनै पर्यो । नेता नं एक को बुवा पनि नेता, भाई पनि नेता, दाई पनि नेता, श्रीमती पनि नेता, बैनी पनि नेता, बैनिको सैनी पनि नेता गोरु बेच्या साईनो पनि नेता, भैंसी बेच्या साईनो पनि नेता, पल्लो घरका पनि नेता वल्लो घरका पनि नेता, यसरी आफूले सबैलाई नेता बनाएपछि आफू चाहिँ नेता नं एक अरु जे जे लेख्छौ लेख आफू त नेता नं एक, नपत्याए हेर्नुस् त एक–एक ।
नेता नं. एक विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । उनीहरू कुनै राजनीतिक पार्टीका पुच्छर बोकेर दगुर्छन् । कुनै सामाजिक मैदानाँ समाज फुटाउने र समाज जुटाउने खेलाँ उफ्री उफ्री अरूलाई दोब्राउन दगुर्छन् । अरुलाई असामाजिक देख्छन् र सञ्जालको आफ्नो स्टाटसाँ के के लेख्छन् लेख्छन् । कुनै एक डफ्फा हुल्याहा बोकेर मान्छे जुदाउँदै लिडर नं एक बन्छन् । विभिन्न तरहका लिडरहरूमा उत्कृष्ट नेता नं. एक नै हो । नेता नं. एकको कुनै पनि समाजाँ कमी हुन्न ।’ अरूले तपाई भनोस् नभनोस् आफै मपाइँ ! त्यति हो नेता भएपछि वल्लो घर पल्लो घर आफ्नै थर बाहेक कसैसँग बोलचालै नगर्ने हुन सक्नु पर्यो । अनि मात्रै आधुनिक नेता भर्यागाँ चढ्यो । बोल्नै परे पनि टयाक्स नभए फ्याक्स नेताजीको काम परे मात्रै पार्नुहुन्छ र्याखर्याख, समाज सोसाइटियाँ उहाँको भाषण सुन्न र दोसल्ला हेर्न लानु हुन्छ फ्याट्ट–फ्याट्ट । नेता नं. एकको भाषणाँ ताली पट्काउनु पर्छ प्याट–प्याट । सीधासाधासँग नबोल्ने नेता नं. एक च्याट र भ्याटाँ सफल हुनै लागे फ्याट–फ्याट । त्यसैले नेता नं. एक को यो बढदो होडबाजियाँ कसले बाजी मार्ने हो को नेता नं एक कहिले कहाँबाट हुने हो हेर्न बाँकी नै छ फ्याट–फ्याट । लौ चिन्नुहोस् है हजुर स्याट–स्याट ।